January 09, 2017 – Shalay ayay ahayd markii Xildhibaano gaaraya 50 Xildhibaan ay gudbiyeen Mooshin ka dhan ah Madaxweynaha maamulka Galmudug mudane, Cabdikariin Xuseen Guuleed, ayaa waxaa arintaasi maanta ka hadlay madaxweyne Guuleed oo weli ku sugan Magaalada Muqdisho.
Madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed ayaa sheegay isaga oo ka hadaayay xalay xaflad ka dhacday Magaalada Muqdisho inaysan habooneyn in xilligaan Baarlamaanka Maamulkiisa ay soo gudbiyaan Mooshin isaga ka dhan ah.
Waxa uuna sheegay Guuleed inay wanaagsan tahay in Baarlamaanka arintaasi ay dib u eegaan oo ay ka noqdaan, iyaga oo qiimeynaya marxalada dalka uu ku jiro.
C/kariin Xuseen Guuleed oo lagu eedeeyay inuu Maamulka Galmudug ka dhig mid fadhiid ah, ayaa hada waxaa ku kacsan Baarlamaanka Maamulkaasi oo maalin ka hor loo diiday inay ku shiraan xarunta Madaxtooyada Galmudug ee Cadaado.
Xildhibaan Duraan Cali Jaamac oo ka mid ah Xildhibaanada saxiixay mooshinka, ayaa sheegay in mooshinkan uu ka dhashay xil gudasho la’aan ku aadan Hogaansare ee maamulka Galmudug.